Sentinel Lobby iri addon yeinonakidza ►Lobby Miner, yekutanga online roulette software iyo inokutendera iwe kuongorora munguva chaiyo nezve 20 matafura roulette.
Kuti ubudirire pachirongwa ichi saka zvakafanira kuti utotenga iyo ► manyorerwoLobby Miner, zvakadaro, kana uchitova nemafaira ezvinyorwa neinoshambadzira dura remamwe matafura eroulette, unogona kushandisa zvakachengeteka chirongwa sezvaunoda, zvakare nekuti mu Sentinel Lobby kune mamwe mabasa anonakidza asinganetse chete iyo data yakaunganidzwa naLobby Miner.
Mashandiro anoita Lobby Sentinel
Sentinel Lobby mukudzidzira inosungira mafaera akanyorwa panguva chaiyo na ►Lobby Miner uye inotsanangura nhevedzano yehuwandu hwakanangana nemukana wakareruka weiyo roulette, saka ngatitaurei nezve chaiwo mikana.
►Red / Nhema
►High / Yakadzika
►Kunyange / Odd
Chinhu chekutanga kuita kana chirongwa chatanga kusarudza matafura atinoda kuongorora (saka zvinofungidzirwa kuti ►Lobby Miner yanga ichimhanya kwenguva yakati uye irikunyora manhamba aburitswa pamatafura akasiyana siyana).
Mupaneru repiri Roulette Tafura Hoooker, iwe unofanirwa wobva wadzvanya pane mabhatani ekuenda kuruboshwe uye sarudza imwe kana anopfuura emavara mafaira arikunyora ►Lobby Miner uye iri mufaira Zvabudiswa naLobby Miner, kana uchikahadzika tarisa vhidhiyo pa ►YouTube, zvese zvichajeka.
Sezvauri kuona mumufananidzo, ini ndasarudza mamwe chete matafura aripo, kunyanya kudzivirira matafura senge Mheni Roulette, Quantum Roulette, pamwe neese otomatiki ma roulettes, seizvo zvinobuda pamatafura aya hazviwanzo kuve zvakasarudzika zvachose.
Kamwe kusarudzwa kuri nyore kwapera, tinogona kubva taenderera kune repaneru rechitatu Kudzora Kamuri, inova chaiyo nzvimbo yedu yekushandira.
Iyo Yekutonga Kamuri
Pano isu tine zvatinazvo zvese zvatinoda kuti tinzwisise zviri kuitika, ndoda munguva chaiyo, Kumatafura akasiyana siyana akasarudzwa mupaneru yapfuura.
Chinhu chekutanga kuita kudzvanya pane bhatani Reload Roulette Matafura, nenzira iyi vanozoiswa mukati Sentinel Lobby mafaera ese ematafura akasarudzika akasarudzika uye muchazoona kuti nhamba dzenhamba dzakanyorwa dzichaonekwawo (Spins ikholamu), Ipo ikholamu yekutanga (Roulette #) inongoshanda chete kuzivisa tafura ine alfabheti inofambira mberi A,B,C, nezvimwe.
Kana izvi zvikaitwa nyore, isu tinogona kuongorora matafura akasiyana akabatanidzwa munzira mbiri dzakasiyana: zvese zvichiteedzana, kana imwe panguva nemaoko.
Panguva ino zvakafanira kuita kumbomira kwakakodzera kuti utsanangure kuti ndeapi marudzi ehuwandu akaongororwa Sentinel Lobby.
Kana isiri yako yekutanga nguva kushanya ThatsLuck.com iwe watove watoverenga chimwe chinhu nezve iyo nhamba yeparamende t-Mudzidzi mune iyo posvo yakatsaurirwa kune tracker yeRoulette ►t-Mhanza Algorithm.
Kana iwe uchinyatsoda kuverenga pamusoro penyaya yandinokurudzira kuti uverenge (kana kuverenga zvekare) iyo posvo, panguva ino, muchidimbu, tinogona kutaura kuti t-Mudzidzi haasi chimwe chinhu kunze kwe kukosha kunoratidza hupamhi hwenzvimbo pakati pemikana miviri inopesana.
Hurefu hwayo hwakaganhurirwa, ngatitii inoenda kubva ku0 (kukwana kwakaringana zvakare kwakatariswa zero) kuenda ku4 (nhamba isina kupfuurwa yepamusoro kukosha).
Iye t-Mudzidzi anogona zvakare kuhaya kukosha kwakashata, mupfungwa yekuti kana kukosha kuri kwakanaka zvinoreva kuti pane imwechete hyperfrequency yemukana, kana iyo kukosha kuri negative zvinoreva kuti kune imwe hypofrequency (uye saka mukuita panenge paine kuwanda kweiyo mukana unopesana).
Isu saka tine huwandu hwakazara pakati -4 e 4, uko kukosha 0 kunomiririra chiyero chakakwana.
Kungove kujekesa, muna 37 kutenderera kukosha zero kunowanikwa kana Tsvuku ikabuda ka18, Nhema ka18 uye kamwe 0.
Sezvo tasimbisa chiyero chereferenzi, tinogona kufunga kuti kana kukosha kweye t-Mudzidzi kuri pasi pe2,5 isu tiri mune yakajairika mamiriro, kupfuura 2,5 gap inoonekwa pachena inotanga, ichipfuura kukosha 3 (tichifunga kuti manhamba ekuverengera anofungidzirwa kunge ari 4), iyo hyperfrequency mukana inofanirwa kutanga kusiya imwe nzvimbo yemukana unoshaikwa (dzokera ku equilibrium).
Ini ndinomira pano, panguva ino zvakakosha kuti utsanangure maitiro ekuverenga iwo manhamba atichataura nezvawo munguva pfupi, ipapo munhu wese achange akasununguka kumisikidza zano rake rekudzora mukaha (dzokera ku equilibrium) pane kuenderera iyo gap (tevera maitiro eiyo hyperfrequency mukana).
Ungawana sei iyo data
Ngatidzokerei kumufananidzo wapfuura, sezvauri kuona mune yakasarudzwa t-Mudzidzi Yekuzivisa Range Ini ndakaisa kukosha 2,5 izvo pahwaro hweizvo zvakanyorwa pamusoro zvinomiririra kukosha kunoratidza kuvepo kwegap iri pachena.
Mumusarudzo ipapo ipapo kurudyi Yekupedzisira Spin Scan # pachinzvimbo tichaenda kunoratidza a Sentinel Lobby kuongorora chete ekupedzisira mazana matatu ekuruka.
Iwe unenge watoona kare nekucherechedza iyo Spins ikholamu, kuti mumufananidzo pamatafura akasiyana siyana asingasvike zana mapini akanyorwa, izvi zvinoreva kuti mune ino kesi Sentinel Lobby zvisinei inozoongorora ese manhamba akarekodhwa, semuenzaniso dai taive nezviuru zvekutenderera patafura, chete mazana ekupedzisira mazana ndiwo anga akaongororwa.
Panguva ino, mushure mekufunga kukosha kweAlert (2,5) uye kusvika kumazana mangani ematafura patafura yekuongorora (yekupedzisira 300), tinogona kusarudza kana ongorora matafura ese zvakateedzana kudzvanya bhatani Shandisa scan All Tables - mune ino nyaya isu tichafanirwa kumirira kuti software ipedze kuongorora kwematafura ese - kana isu tinogona kuongorora matafura acho ega, nekudzvanya bhatani nedenderedzwa dzvuku mukoramu. Tarisa.
Maitiro ekududzira iyo data
Kamwe kana nhamba dzakaburitswa pamatafura ese dzave kuongororwa, yedu yepaneru inovhenekera nemagetsi emagetsi, zvichiratidza kuti ndeipi tafura uye nemukana wei mukana unowanikwa neakanaka kana akaipa kukosha kwe2,5.
Ramba uchifunga kuti kutsvaga kwekukosha 2,5 (kana chero chaunosarudza) kuchatanga neshure kubva kwekupedzisira spin yakanyorwa patafura, kana iyo kukosha 2,5 ichiwanikwa paspin mazana matatu, tsvakiridzo inomira uye mune yakakosha Chikamu cheTranche tsvaga chaizvo mangani ekupedzisira ma spins akagadzira iyo gap yakatsvaga. Iwe unogona kuisa kukosha kunyangwe akakurisa kupfuura mazana matatu, zviripachena kuti nguva dzekuongorora dzichawedzera.
muenzaniso: mumufananidzo uri pamusoro paTafura B kukosha 2,5 kwakagadzirwa neRed chance, kukosha 2,5 kwakanaka, saka iko iko iko iko Kurova ndiko kwakabuda kakawanda, zvisinei, zvakadaro, kana tikatarisa Chikamu cheTranche, isu tinoziva kuti kukosha uku kwakagadzirwa mumatanho matanhatu chete, saka zvinoreva kuti 6 Tsvuku nhamba dzichaburitswa dzakateedzana, hapana chakasarudzika ipapo.
Mamiriro ezvinhu akafanana anoitikawo kuMatafura F e J, saka isu tinongofanirwa kumirira nguva dziri nani uye kudzokorora kuongorora.
Sezvo iwe uchiziva ►Lobby Miner yakagadzirirwa kuisa manhamba nekusingaperi, saka wadii kuita kuti Lobby Sentinel ishande zvakafanana?
Ukabaya bhatani Autominer Off uye gadza (kutanga) nguva yenguva, maminetsi mashoma mashoma Sentinel Lobby ichadzosera iyo data yakanyorwa naLobby Miner uye ichadzokorora kuongororwa kwematafura ese uye izvi kusvika pakupedzisira a alarm alarm iyo inoshandiswa nekudzvanya pane sarudzo Ruzha Rwokuzivisa.
Saizvozvo, kana pachinzvimbo che alarm inonzwika iwe uchida email yekukuzivisa pane yako smartphone, ingo gonesa sarudzo Email Alert.
Sarudzo mbiri dzekupedzisira pane ino chirongwa chirongwa ndeiyi StayOntop iyo inosiya hwindo repurogiramu nguva dzose kumberi uye iyo Bvisa bhatani, iyo inonyaradza iyo yakamboshanda inonzwika alarm.
Asi unotamba riinhi?
Heano mamiriro akasiyana zvakanyanya kupfuura nakare, apa isu tine iyo Tafura G ine Mudzidzi t-kukosha kwe 2,62 asi chete mushure megumi spin, nepo iyo Tafura F zviri pa 2,53 nemukana High pakupedzisira 179 spin.
Panguva ino ini ndinomira, mupfungwa yekuti iwe unofanirwa kuongorora zano (nekutenda zvakare kumaturusi atichawana gare gare), asi uchifungidzira semuenzaniso kuti iwe unoda kutamba kuti udzokere kuenzanisiro yeiyo Yakakwirira mukana weiyi tafura, tinya pane bhatani riine green dot re column Kurwa! uye regai tione zvinoitika.
Zvinoitika kuti iwe unobva watochinjira kune iyo Autopilot pani, uko muchikamu chepamusoro tinowana a mbeu bot kubheja otomatiki kuti mangani ma spins atinoda uye atichataura nezvayo gare gare, nepo muchikamu chezasi kune zvese zvinoratidza kubheja kwedu.
Chinhu chekutanga chatinoona ndechekuti zita reTafura F (Italian Roulette mune ino kesi), tobva tavhura browser redu ndokupinda mutafura senguva dzose.
Pashure chaipo pezvatinofanira kuita ndizvo pinda nemaoko nhamba shanu kana nhanhatu dzakatobuda panguva iyi uye dzatinogona kuona munhoroondo yetafura pachayo.
Pasi pekunyorwa kwezita retafura kana iwe ukacherekedza kuti ndeyekusingaperi nezvose zvinobuda mukutevedzana, saka zvichave nyore kwazvo kunzwisisa kubva kunhamba ipi yaunoda kutanga kuisa.
pa Wedzera nhamba nyowani chingobaya pacarpet mumufananidzo, kuitira pedza chero zvinyorwa zvisiri izvo, tinya-kaviri panhamba isiriyo mukamuri yekugara.
Sezvauri kuona mumufananidzo, mushure mekupinda nhamba nhanhatu dzakange dzabuda panguva ino, isu zvakare tine imwe yakakosha data: pasi peiyo t-Mudzidzi kukosha kwemukana wega wega kune chokwadi zvakare huwandu hwezvikwata izvo mukana wekufungidzira anofanira kurega mutambi achikunda (Exp. Kuwana) kana gaka richidzokera ku equilibrium, i.e. ne t-Mudzidzi = 0.
Muchokwadi, pasi pemukana wepamusoro pane tarisiro yezvikamu gumi nesere zvekuhwina nekubheja paMukana wakaderera (kana 18-1 kana uchida, kana Manque yevaFrench vaunoshanda navo).
Saka kana ndaida kutamba kuitira kudzoka kwemarara (saka ndinofanirwa kubheja paMukana wakaderera), ndinogona kuseta chinangwa (Stopwin) che9 kana gumi mayunitsi (hafu yekudzoserwa kunotarisirwa).
Ini ndinotaura kuti tarisiro inotarisirwa (Exp. Kuwana) haisi nhamba yakaumbwa, asi iri chaizvo kukosha kwezvakabuda izvo mukana wakaderera unofanirwa kuve nawo mu185 spin.
Dambudziko, zvisinei, nderekuti isu hatizive kuti kangani kupora kunogona kuitika, mupfungwa yekuti zvirokwazvo mukana wakaderera uchagadzirisa zvakashata, asi kana ukasazviita mukati memapini mazana mashanu nemazana matanhatu, zero icha idya zvese zvingave zviripo (unonzwisisa kuti nei uchirasikirwa roulette?).
Kuchengetedza mutambi kurwa nenjodzi iyi yekufungidzira, ini ndapa yekupedzisira sarudzo yepaneru iyi (kana hazvo chikamu chepazasi chine chekuita nekubhejera), inova Bheja% sarudza.
Izvi zvinongotibvumidza isu kusarudza muzana yezvakarova zvakacherechedzwa (179 mumufananidzo) nenzira yekubvisa kunyara kwekusarudza nguva yekumira.
Ngatitaurei kuti kukosha kwakaringana kwechinangwa ichi kutamba 15% yezvinyorwa zvakanyorwa.
Saka kana ndikasarudza gumi nemashanu muBet% sarudza menyu, zvinoitika kuti ...
Zvinoitika izvo mune bot tinowana kuwanda kwepfuti kuridzwa, inova 27 (kana 15% ye179), saka panguva ino zvakaringana kuita bheji rekutanga paMukana wakaderera wobva wadzvanya iyo Bhatani rebhatani, iyo inomutsa iyo bot yezvikamu 27.
Mushure mezvikamu 27, tinogona kuseta iyo bot kudzima PC (Shutdown) kana kuridza alarm (Tora Mhere).
Kana, kune rimwe divi, nekuda kwezvimwe zvikonzero iwe uchida kusiya bot kuti ubheje gumi, 10 kana chiuru chipini, ingoisa wega manyorerwo aunoda mumunda padhuze neOFI bhatani uye wotanga zvese.
Gadzira iyo Autopilot
Il Trigger Point mukudzidzira iri poindi yeiyo skrini iyo chinja ruvara chete kana kubhejera kwavhurwa.
Pane ino puratifomu (yakafanana neyaanogara Lobby Miner), kuverengera mumasekondi kunoonekwa nekeji yega yekubheja, uko manhamba acho ari makuru uye machena.
Sezvinoratidzwa nemuseve mutsvuku, ndinogara ndichisarudza poindi iri pakati penhamba 1.
Kupinda mahurongwa uye iyo kodhi yemavara yeTrigger Point, ini ndinongofanirwa kugonesa sarudzo Turbo Config (kumusoro kurudyi), chindimisa panhamba 1 painowoneka (munzvimbo yakaratidzwa neColor Code mu Pixel Info bar è ClWhite semumufananidzo) e tinya nzvimbo kamwe chete pane keyboard.
Ndizvozvo zvese, marongero eiyi poindi anozo nyorwa otomatiki muchirongwa! Zvekudzokorora / bhatani rekusimbisa rekubhejera chete, ndinofanira kuzviisa pachezvangu kana zvishoma pakati peizvi uye kuverenga zvinongedzo pahwindo uye ndobva ndazvipinza mumabhokisi maviri. X Kubvumirana e Y Coord kumusoro kuruboshwe.
Ngatidzokororei: Ini ndinotarisa iyo Turbo Config sarudzo, isa mbeva pane nhamba 1 yekuverenga, ita shuwa kuti kodhi yemavara yakachena (clwhite) uye tinya nzvimbo. Ipapo ini ndinoisa mbeva pane bhatani randaizodzvanya kuti ndione kubheja (yeuka kuti kubheja kwekutanga kunoitwa nemawoko pamukana, saka kune anotevera zvinokwana kungodzvanya bhatani rekudzokorora) uye nekuverenga zvinongedzo mune iyo Pixel Info bar, ini ndinovapinza ivo mumabhokisi maviri X coord uye Y coord. Ndizvo.
Pakupedzisira, ini ndichatsanangura mashandiro emabhokisi maviri aya Bet Nguva e Bet Kunonoka: yekutanga ndeye kaunda iyo inomisikidzwa iko kungoonekwa neTrigger Point pavhidhiyo (saka iwe uchaona kunyangwe iyo Trigger yakagadzirirwa nenzira kwayo), yechipiri ndiyo nhamba yemasekonzi ekumirira isati yavavarira kubvira pakatanga Trigger Point. .
Kana iwe ukaisa 2 mundima iyoyo zvinoreva kuti kubheja kuchaitwa masekondi maviri mushure mekunge Trigger Point yaonekwa pachiratidziri.
Kune chero kupokana kwazvokwadi tarisa vhidhiyo pa ►YouTube.
Iyo Statistical Laboratory
Iye zvino ngatiendererei kune yekupedzisira asi kwete mashoma mapaneru muLobby Sentinel, ayo ari t-Mudzidzi Rabhoritari.
Kutenda kune ino simulator iwe unozogona kuita isingaverengeke nhamba yemiyedzo kuti unzwisise kuti iyo mukana wemukana unozvibata sei uye iwe zvakare uchakwanisa kuwana iwo akakwana parameter kumisikidza yako mutambo wezano.
Calculator yekutanga kumusoro (t-Mudzidzi Calculator) yakapusa t-Mudzidzi kukosha kukosha karita TS Calc, inoenderana tS kukosha kucharatidzwa ipapo padyo nayo.
Pakarepo pazasi peizvi tinowana iyo t-Mudzidzi Simulator, izvo zvichatibvumidza isu kuongorora huwandu hunonakidza hwehuwandu.
Muchokwadi, mune iyo simulator ini ndinogona kuisa, pamusoro peiyo huwandu hwespiniki kuti iongororwe, maviri maitiro eiyo t-Mudzidzi (vakasarudzika A e B) iyo yandinoda kuongorora.
Wobva wadzvanya kiyi Fungidzira Ndichava neimwe kuenzanisa kumwe chete nemagirafu ane hukama eiyo t-Mudzidzi chete mukana (semuenzaniso Tsvuku) uye girafu (iyo yepazasi) nemafambiro edhikiti yemari chaiyo inotaurwa kune vaviri vafungidziri vatambi vanogara vachibheja zvakasiyana paRed kana nguva dzose Nhema (iyo zero inoburitsa iri pachena yakafukidzwa neiyo kuverenga)
Kudzvanya pakutevedzera kiyi kakawanda kuchazove nekufananidza kwakateedzana.
Asi ko kana iwe uchida kuona mhedzisiro yemakumi mashanu ezviuru matanho e50.000 spins imwe neimwe? Kune izvi ingo mhanyisa iyo Rng bhatani uye mushure memasekondi mashoma (kana maminitsi kana iwe wakapinda nhamba yakakura yekufananidza kana kuwedzeresa urefu hwetanho imwe chete, semuenzaniso kubva pa50 kusvika ku200 kana kupfuura ma spins), iwe unozogona kucherechedza izvi zvinonakidza data, zvinoti:
► kangani sepesenti kukosha kweiyo T-Mudzidzi kwakapfuura iyo kukosha A izvo zvatakaonesa mubhokisi rehama;
► kangani sepesenti kukosha kweiyo T-Mudzidzi kwakapfuura iyo kukosha B izvo zvatakaonesa mubhokisi rehama;
► kangani muzana muzana kukosha kweiyo t-Mudzidzi iyo yapfuura kukosha A zvakare ine yakapfuura kukosha B.
Yese mhedzisiro mhedzisiro zviri pachena zvine chekuita nenhamba yemiyedzo inoratidzwa mumunda kurudyi kwe Rng bhatani uye inonongedzera kune imwechete tranches yenhamba ine urefu hwakaenzana neiyo inoratidzwa mumunda Spins.
Asi izvi zvese zvinogona kutiitirei? Chokwadi zvinogona kuve zvekutsigira kuratidza kuti ndedzipi zviitiko zvisingaverengeki zvekutamba nazvo, kana zvinowanzoitika kuridza uchifarira izvi.
Zvisingaite chiitiko-chakavakirwa kurwisa muenzaniso: Ini ndinokumbira iyo simulator kuti ibudise zviuru makumi mashanu zvemazana ezana zana anotenderera imwe neimwe kuti aone kangani, kana kukosha kweTS kwakwira kusvika pa50.000, zvobva zvadonha (kutamba saka kuti uwane mukana weiyo hypofrequency mukana).
Kana ini ndikapinda aya ma parameter musimulator mushure memaminetsi mashoma ekumirira ndinowana mhedzisiro iyi:
Kana iyo tS yasvika katatu, ingori nguva imwe chete kubva pa3 (1% yenguva yacho) inosvikawo pa5.
Izvi zvinondiudza kana ndiri mupaneru Kudzora Kamuri Ndakagadza a chenjerera pane kukosha 3 uye panguva yekunyoresa izvi zvinoitika kuTranche yenhamba dzakatenderedza zana maspineti, ini ndaigona zvakare kufunga kuyedza kuhwina mamwe mayuniti nekutamba kuvhara mukaha wemukana wekushomeka.
Chaizvoizvo Chiitiko Chakavakirwa Kurwisa Muenzaniso: Ini ndinokumbira iyo simulator kuti ibudise zviuru makumi mashanu zvemazana ezana zana anotenderera imwe neimwe kuti aone kangani, kana kukosha kweTS kwasvika pa50.000, saka inoramba ichikwira (kutamba saka kuenderera kweye zvinoitika zveiyo hyperfrequency mukana).
Kana ini ndikapinda aya ma parameter mune iyo simulator (nguva dzose mushure memaminetsi mashoma ekumirira) ini ndinowana uyu mhedzisiro:
Iyo 57,92% inongondiudza kuti kana iyo TS ikarova 2 zvinowanzoita kuti irambe ichikwira kwete kudonha.
Ini ndinomira pano, iyi ingori mienzaniso miviri yakapusa yekumisikidza zano rinogona kuitika, sarudzo uye data rinogoneka kuyambuka zvechokwadi rakawandisa, chinhu chega chandinokurudzira ndechekumirira nemoyo murefu kwenguva refu yekufananidza pasina kubaya zvimwe pachirongwa. , kunyangwe zvese zvikaita sekunge zvakavharwa uye kumwe kunyora kwakadai sekuti "chirongwa hachipindure" kuchioneka, muchokwadi kuri kushanda, iwe unongofanirwa kumirira nguva inodiwa, zviripachena kuti yakabatana nesimba remakomputa ecpu yekomputa yako.
Pakupedzisira skrini yekupedzisira! Neraki, pane zvishoma kwazvo zvekutaura pano, ingori nyaya yekumisikidza iyo 2 marudzi ezveruzivo yakapihwa mupaneru Kudzora Kamuri.
Yekutanga uye yakapusa kusarudza ruzha rwatinoda kunzwa kana alarm yeiyo tS kukosha ichiitwa kana isu taita basa Autominer, kana kana kubheta kutenderera kwebhodhi kwapera.
Kana iwe ukaisiya paMute zviri pachena hapana chinonzwikwa kunyangwe iwe waita yambiro alarm, saka gadzirisa zvinoenderana.
Kupfuurirazve pasi tinowana marongero emamiriro ezvinhu kana tichida kugamuchira maemail nguva dzese apo alarm yeiyo t-Mudzidzi kukosha kunokonzereswa (zvirinani kuti zvishandiswe kana isu tavhura iyoAutominer).
Semiparameter unofanira kuisa idzo dzebhokisi rako retsamba, idzo dzinozove dziri dzose dzinotumira uye dzinogashira yambiro meseji, kana iwe unogona kushandisa rakasiyana bhokisi retsamba iro iwe rawakagadza panzvimbo yako semutumiri Zvese zvigadziriso zvemabhokisi aya zvakachengetwa imomo paPC yako mufaira pamwe ne .ini yekuwedzera iyo iwe yaunowana mukati mechirongwa dhairekitori, hapana data rinounganidzwa kana neimwe nzira rinotakurirwa kunze.
Kana ese ma parameter apinda, unogona kuyedza kana kumisikidzwa kuri kwechokwadi nekudzvanya bhatani Kwayedza Service, iyo inozotumira pfupi bvunzo meseji kubva kune anotumira kune yekuenda mailbox. Ndizvo.
Ok, izvozvi ndizvozvo chete, nakidzwa uye usakanganwa kunyorera kuchiteshi cheTeregiramu kana iwe uchida kufanoona dzese nhau pane anouya mabhuku.
File Download	LSentinel.zip - 4 MB
Download 4966 Downloads